अचम्मका विज्ञापन : दुई रुपैयाँमा पत्रिकादेखि विज्ञापन गुडाउने गाडीसम्म
सागर चन्द काठमाडाैं, २२ असार
औपचारिक रूपमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकाली) बन्द भएको ६ वर्ष पुग्यो । तर, जचुकालीले उत्पादन गर्ने चुरोटको विज्ञापन भने अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
जचुकालीले आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गर्न राखेका होर्डिङ बोर्ड राजमार्ग छेउमा देख्न सकिन्छ ।
गैंडा र याक जस्ता लोकप्रिय चुरोट उत्पादन गर्ने जचुकालीले सुरुवाती वर्षतिर वार्षिक २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्थ्याे ।
पृथ्वी राजमार्गको नौबिसेमा जचुकालीले उत्पादन गर्ने याक र गैंडाको विज्ञापन लेखिएको होर्डिङ बोर्ड देख्न पाइन्छ । एक साताअघि धादिङको यात्रा गर्दा गाडीबाट देखियो याक र गैंडाको विज्ञापन । त्यतिखेर यसको फोटो खिच्न पाइएन । तर, पछि काठमाडौं फर्किने क्रममा फोटो खिच्नकै लागि धार्केबाट हिँडेरै नौबिसे पुगें ।
नौबिसेमा यो विज्ञापन कहिले राखिएको हो, थाहा छैन् । तर, कारखाना र उत्पादन बन्द भए पनि यसको विज्ञापन देखिनु लोभलाग्दो हो । आजभोलि बजारमा उपलब्ध हुने चुरोटमा प्रयोग भएको सुर्तीलाई विभिन्न नाम दिइएको छ ।
जचुकालीले याकको विज्ञापनमा लेखेको छ, उच्चत्तम भर्जिनिया सुर्तीबाट बनेको ।
जचुकालीले आफ्ना उत्पादनको नाम पनि नेपाली प्रकृतिबाटै खोजेर राखेको रहेछ, गैंडा र याक । गैंडा नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने जनावर हो । याक हिमाली क्षेत्रमा पाइने जनावर हो ।
भनिन्छ, याक चुरोटको लोकप्रियता बुझ्न यो रमाइलो गीत...
‘माई नेम इज ज्याक
चुरोट खान्छु याक.....’
सरकारले जचुकाली बन्द गरेपछि फेसबुकमा ‘जनकपुर चुरोट खारखाना बचाऊ अभियान’ नामको पेज क्रिएट गरिएको छ ।
२९ पुस २०२९ मा राजा विरेन्द्रले उद्घाटन गरेको यो चुरोट कारखाना निर्माणमा तत्कालीन सोभियत संघले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
२०६८ देखि उत्पादन बन्द भएपछि सरकारले २०७० मा यो चुरोट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
‘चिसो भनेकै कोकाकोला !’
कोकाकोलाको विश्व विख्यात स्लोगन हो । १ सय २३ वर्ष पुगिसकेको कोकाकोला विश्वभर पिइने सफ्ट ड्रिंकमा पहिलो नम्बरमा पर्छ सायद ।
अमेरिकाको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन कोकाकोला नेपालमा सन् १९७९ मा भित्रिएको थियो । आक्रामक विज्ञापन नीतिका कारण संसारभरको बजारमा छाएको कोकाकोलाको पुरानो विज्ञापन देखिन्छ, काठमाडौंमा ।
माइतीघर मण्डलको पारिपट्टि देखिन्छ कोकाकोलाको पुरानो विज्ञापन । आर्मी मुख्यालय छिर्ने बाटोको छेवैमा ‘रामशाह पथ’ को डिरेक्सन देखाउन राखिएको यो बोर्डमा कोकाकोलाको पुराना रूप देखिन्छ ।
‘मेरो पौरख मेरो गौरव मेरो काठमाडौं’ स्लोगन लेखिएको यो बोर्डमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन देखिनु रोचक विषय हो । कोकाकोला लेखिएको ठीक मुन्तिर काठमाडौं महानगरको छोटकरी रूप ‘का.म.पा’ लेखिएको हुँदा यस्तो लाग्छ, कोकाकोला ‘कामपा’ले उत्पादन पो गरेको हो कि ?
दुई रुपैयाँमा पत्रिका !
राष्ट्र बैंकले दुई र एक रुपैयाँको नोट प्रकाशन गर्न नै बन्द गरिसकेको समयमा काठमाडौंमा दुई रुपैयाँमा पत्रिका पाइने विज्ञापन देख्न सकिन्छ । विज्ञापन हो, अन्नपूर्ण पोष्टको । मूलधारका भनिने दैनिक पत्रिका दुई रुपैयाँमा पाइन्थ्यो भन्यो भने अहिलेको पुस्ताले पत्याउँदैनन् । तर, सहरमा विज्ञापन छ, पत्रिका दुई रुपैयाँमा पाइने ।
विज्ञापनमा ‘अन्नपूर्ण पोष्ट सम्पूर्ण पत्रिका, मात्र २/– रुपैयाँ’ लेखिएको छ । खासमा यो विज्ञापन वर्षाैं पुरानो हो ।
औषधि व्यवस्था विभाग र निःसन्तान उपचार केन्द्रको बीचबाट छिर्ने गल्लीको बिजुली खम्बामा अन्नपूर्ण पोष्ट दुई रुपैयाँमा पाइने समयको विज्ञापन छ ।
अहिले अन्नपूर्ण पोष्टको मूल्य १० रुपैयाँ छ । त्यसअघि अन्नपूर्ण पोष्टको मूल्य ५ रुपैयाँ थियो । र, यसअघि ३ रुपैयाँ थियो । यो विज्ञापन अन्नपूर्ण पोष्टको मूल्य ३ रुपैयाँ हुँदाको हो ।
प्रिन्ट मूल्य ३ रुपैयाँ भए पनि ग्राहक आकर्षित गर्न पत्रिकाले प्रिन्ट मूल्यमाथि २ रुपैयाँको छाप लगाउँथ्यो । यो विज्ञापन त्यही समयको हो ।
पत्रिकाहरुले २०६८ मा आफ्नो मूल्य १० रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
पत्रिका दुई रुपैयाँमा पाइन छाडेको वर्षाैं भइसक्दा पनि पत्रिका दुई रुपैयाँमा पाइने विज्ञापन किन नहटाएको होला ?
विज्ञापन गुडाउने गाडी !
कैयौं सवारी साधनको पछिल्लो भागमा र चालक छिर्ने द्वारमा सायरी तथा गीत लेखिएका हुन्छन् । तर, कतिपय गाडी भने विज्ञापन बोकी गुड्छन् ।
टाटाको यो सानो भ्यानमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन पोतिएका छन् । भारतीय अभिनेता देव आनन्दको फिल्म ‘हिरा पन्ना’को एउटा कारमा संसारभरका सहरको नाम पोतिएको हुन्छ । तर, यहाँ यो गाडीमा भने विश्वविख्यात कम्पनीको नाम पोतिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ को सुरुवात रारा पुगेर गरे । कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भन्दै उनले रारा ताल किनारमा क्याबिनेट बैठक पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेको कर्णाली पर्यटनलाई सरकारले भुले पनि यो गाडीले भने भुलेको रहेनछ त्यसैले त यो गाडीमा लेखिएको छ, भिजिट कर्णाली प्रदेश । सरकारी विज्ञापन बोकेर गुड्छ यो यात्रुवाहक बस ।
यो भारतीय नम्बर प्लेटको मालवाहक ट्रकको पछिल्लो भागमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालको नारा पोतिएको छ, बेटी बचाओ बेटी पढाओ । यही नारासहित भारतमा मोदीले महिला जागरण कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । यस्तै, अवधारणाको कार्यक्रम अहिले प्रदेश २ ले पनि सुरु गरेको छ । भारत सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापन नेपालमा पनि गुडाउँछ यो ट्रक ।
महानगर क्षेत्रमा विज्ञापन गरेबापत महानगरले कर उठाउँछ । रामशाह पथ देखाउने बोर्डको कोकाकोला विज्ञापन र गल्लीको बिजुली पोलमा झुन्डिएको अन्नपूर्णको यो विज्ञापनको महानगरले पैसा उठाउँछ होला त ?
मालवाहक सवारी र यात्रुवाहक सवारीमा पोतिने यी विज्ञापनको कर कसरी उठाइँदो हो ?
यस्तै, कम्पनी नै बन्द भइसकेको र उत्पादन नै नहुने चुरोटको विज्ञापन देखेर पसलमा कसैले गैंडा र याक चुरोट माग्यो भने ? अस्तित्वमै नरहेको कम्पनीको बडेमानको होर्डिङ बोर्डको कर कोसँग उठाउने ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, ०४:४८:००